Mayelana NATHI - SHENZHEN FUXINGYE IMPORT & EXPORT CO., LTD
SHENZHEN FUXINGYE UKUNGENISA NOKUTHUTHELA CO., LTD
Inkampani yethu esungulwe ngo-1996, ifektri eyakhiwe ngo-2010, etholakala esifundeni saseLonggang, eShenzhen, esifundazweni saseGuangdong. Ifektri yethu ikhethekile ekukhiqizeni ibanga eliphakeme noma eliphakathi le-porcelainware noma i-stoneware ye-bakeware, i-ceramic enobungani bemvelo.
Cishe abasebenzi abayikhulu sebebonke
Indawo yeFektri: 10,000 m²
Umthamo wokukhiqiza wanyanga zonke: 1.5-1.8 million pc
Ukuhambisa iziqukathi ezingama-60-70 ngenyanga
Inkampani yethu nefektri isivele isivumile isitifiketi se-DISNEY, BSCI, SEDEX kanye ne-Quality System. ISO9000-2005. Okwamanje, sinemboni yensimbi engagqwali etholakala e-JIEYANG, esifundazweni sase-GUANGDONG. Sinikeza indinganiso ehlukile yensimbi ephelele yokusika insimbi, ithuluzi lasekhishini namanye amatafula wensimbi angenasinakha.
Sisekela ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu, ukunamathela esimisweni sokuklanywa kuqala, ikhwalithi yokuqala, isikhathi sokulethwa ngesikhathi, ukuhlinzeka amakhasimende omhlaba ngezimpahla nezinsizakalo ezenelisayo.
Ngasikhathi sinye, sineqembu elinamandla lomklami.
Kunabaqambi aba-4 abangochwepheshe enkampanini yethu. Okwamanje, umklami wesikhathi ovela kuwo wonke umhlaba onjengeFrance, i-Austral, i-Italy, iTurkey, iHong Kong njalonjalo. Njalo ezinyangeni ezimbili sizokwethula okungenani imiklamo emisha engama-20 emakethe ehlukile. Ngokususelwa kumandla wethu wokuqamba aqinile, sihola njalo ukuthambekela. Kungakho amakhasimende amaningi asezingeni eliphezulu esebenzisana nathi.
Kunamakhasimende amaningi asethemba isikhathi eside kusuka e-Europe, e-USA, e-Australia, e-East-Asia, e-Turkey, e-Dubai, eRussia njalonjalo. Sinikeza insizakalo yesinyathelo esingu-1 kulawo makhasimende. Kusuka kumklami kuya kumasampula, i-oda liqinisekisa ukuthunyelwa noma lihlanganise izimpahla ezahlukahlukene endaweni yethu yokugcina impahla. Sinikeza insizakalo ecabangelayo futhi eningiliziwe.
Amafektri ethu asevele edlulisa uhlelo lokulawula ikhwalithi i-ISO9000-2005. Silandela indinganiso ngokuqinile ukuze siqiniseke ukuthi isisekelo ngasinye somkhiqizo sisesimweni esihle.
Sizigoba ekudaleni izinto ezinhle kakhulu ngokwengeziwe kumakhasimende ethu onke ngentengo ebalulekile kanye nensizakalo ehamba phambili.
Impilo yekhwalithi yokudala!